VaMugabe Vovimbisa Vashandi veHurumende Mari
Kubvumbi 07, 2011
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, neChitatu vakaita musangano nevamiriri vevavashandi vehurumende kuState House vachikurukura nyaya yemihoro inotambiriswa vashandi vehurumende.
VaMugabe vanonzi vakavimbisa vashandi ava kuti vachawedzerwa mari dzavo muna Chikumi. Vashandi vanonzi vakatenderana naVaMugabe kuti mushandi wepasi pasi achange achitambira mari inosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana, kana kuti 50% yePoverty Datum Line iyo iri paUS$502 pari zvino.
Mushandi wepasi pasi pari zvino anonzi ari kutambira mari inosvika US$128 pamwedzi. Sangano reInternational Monetary Fund, IMF, rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kumira kuwedzera vashandi vayo nekuti zvinogona kuendesa hupfumi kumawere.
Asi VaMugabe vanoti izvi hazvina maturo vachiti hurumende iri kushaya mari nenyaya yezvirango zvayakatamerwa.
Gurukota rezvevashandi vehurumende, VaEliphas Mukonoweshuro, vanoti hapana zvavati vanzwa maererano nemusangano wakaitwa naVaMugabe nevamiriri vemasangano evashandi vehurumende.
VaMukonoweshuro vanotiwo hapana mari inowedzerwa vashandi vehurumende ivo vasingazive.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti nyaya yematongero asina kunaka ndiyo iri kupa kuti Zimbabwe itadze kugadzirisa nyaya dzezvehupfumi. VaMugabe vanoti mari haipo asi vachashandisa masimba avo kuitira kuti vakabata homwe vape vashandi vehurumende mari.
Pane kunetsana panyaya yemari iri kubva mukutengeswa kwemangoda pakati pegurukota rezvemari, VaTendai Biti, negurukota rezvezvicherwa, VaObert Mpofu. VaBiti vanoti havana mari svinu yavari kuwana, asi VaMpofu vachiti mari inobva kumangoda nezvimwe zvicherwa inogona kutambirisa vashandi vehurumende mari yakanaka.
Munyori mukuru musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, VaRaymond Majongwe, vanoti mari ikasauya muna Chikumi vanokanda mapadza avo pasi.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, VaProsper Chitambara, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti hurumende haina mari yekupa vashandi.
Hurukuro naVaRaymond Majongwe naVaProsper Chitambara